Fanamarihana 7 tompona mandefa fitoriana amin'ny kilasy voalohany any Korea atsimo | Vaovao IPhone
Ny fitoriana amin'ny kilasy voalohany amin'ny anaran'ny mpividy 527 Galaxy Note 7 dia mitaky $ 440 isaky ny olona noho ny fahasahiranana amin'ny fisintomana sy ny fanjavonan'ny telefaona farany. Nilaza ny orinasan-dalàna izay manatanteraka ny fitoriana fa "mikasa ny hametraka fitoriana isam-bolana izy."
Ny olana dia tsy voatery niverina tany amin'ireo magazay imbetsaka ireo tompon'ny Note 7, fa koa Rehefa misintona ilay rindrambaiko dia mametra ny bateria ho 60 isan-jato fahaiza-manao amin'ny fampiasana ara-dalàna ny fitaovana.
Nilaza ny orinasa fa nahazo fitarainana telo avy amin'ireo olona nirehitra tamin'ny findainy, ary ireo dia tafiditra ao anaty fangatahana misaraka.
Samsung tamin'ny alatsinainy teo dia nanolotra seho ho an'i Korea ny olona manolo ny Note 7 amin'ny Galaxy S7 na S7 Edge dia hanana fihenam-bidy maranitra ho an'ny Galaxy S8 na Note 8, tsy nisy naseho tamin'ny fomba ofisialy. Raha ny tena manokana dia tsy mila mandoa ny antsasaky ny vidin'ny S7 ny olona vao mahazo ilay fitaovana amin'ny 2017.
Mety ho tonga any amin'ny firenen-kafa koa io programa io, hoy i Samsung, nefa tsy manome antsipiriany bebe kokoa. Amin'ny faritra maro dia nanolotra famerenam-bola na fifanakalozana ny orinasa, amin'ny tranga sasany, bola fanampiny amin'ny fahazoana vokatra hafa.
Ny Wall Street Journal dia nilaza fa ny Alahady teo Samsung dia mbola manandrana mamantatra ny anton'ny firehetana Note 7, nanaiky fa ny olana dia voamarina fa pilina mifandraika amin'ny bateria fotsiny rehefa nangataka ny fitadidiana. Ny orinasa aza voalaza fa fanemorana ny fivoaran'ny Galaxy S8 mandritra ny tapa-bolanasatria miasa amin'ny «autopsie» an'ny Note 7 ny injeniera.
Samsung dia nanambara fa nanilika anecdotes vitsivitsy tamin'ny afo tao amin'ny Note 7, saingy nanapa-kevitra avy eo fa tsy maintsy mihetsika haingana izany rehefa avy nazava fa matotra ny olana, fa tsy manao fanadihadiana feno. Izany dia nanjary ny fahatsiarovana ireo fitaovana ary manakarama mpamatsy bateria vaovao, izay tsy nanampy tamin'ny famahana na inona na inona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Ny tompona Galaxy Note 7 dia mandefa ny fitoriana voalohany any Korea Atsimo
Apple dia nandinika ny fandefasana iMessage ho an'ny Android ary nanao fanesoana mihitsy aza